एमाले दाङलेरास्ट्रिय महाधिबेशनका लागि सर्बसम्मत प्रतिनिधी छान्न बनायो कार्यदल - Ganatantra Online
एमाले दाङलेरास्ट्रिय महाधिबेशनका लागि सर्बसम्मत प्रतिनिधी छान्न बनायो कार्यदल
दाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दाङको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकको पहिलो एजेण्डा दाङका ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बिहीबार क्षेत्रीय कमिटीको भेला गर्ने निर्णय रहेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशलाई सफल पार्नका लागि पूर्व तयारी, जनसहभागिता र व्यवस्थापनका लागि बिहान ११ बजे बैठकको आयोजा गरिएको जिल्ला सचिव मनोहर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा शान्ता चौधरी, हुकुम बहादुर बस्नेत र रेवतीरमण शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ मा नरुलाल चौधरी, टीकाराम खड्का र लक्ष्मण आचार्य र क्षेत्र नं. ३ मा छविलाल वली, घनश्याम पाण्डे , मनोहर बुढाथोकी, कृष्ण भुसाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय महादीवेशनका लागि २७ गते प्रतिनिधि छनौट गर्न सर्वाधिकार समिति समेत गठन गरिएको छ । समितिमा छविलाल वली, शम्भु गौतम, नरुलाल चौधरी, शान्ता चौधरी, टिकाराम खड्का, हुकुम बस्नेत, कृष्ण भुसाल, मनोहर बुढाथोकी रहनु भएको छ । समितिले सर्वसहमत प्रतिनिधी छनौट गर्ने छ ।
पार्टी सचिव बुढाथोकीका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट ६ पुरुष, ३ महिला सहित ९ जना, क्षेत्र नंं.२ बाट ५ पुरुष, २ महिला सहित ७ जना र क्षेत्र नं. १ बाट ४ पुरुष, २ महिला सहित ६ जना र दलित ३ जनासहित दाङबाट २५ जना प्रतिनिधिको छनौट गरिने छ । भेलाहरु १ को नेत्रलाल स्मृति प्रतिष्ठान रातोडाँडा लमही, २ को जिल्ला पार्टी कार्यालय घोराही र ३ को पार्टी कार्यालय तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले कात्तिक ६ र ९ गते वडा नगर अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यलाई बधाई दिने र वडा र नगर अधिवेशन सम्पन्न गर्न फिल्डामा खट्ने पेशागत महासंघसंग आवद्ध घटक संगठनका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकतालाई धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको छ । त्यस्तै आसन्न तुलसीपुर खानेपानीको निर्वाचनका लागि पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउन तुलसीपुर उपमहानगरापलिका नगर प्रमुख घनश्या पाण्डेको संयोजकतवमा ११ सदसीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ । जसको सदस्यहरुमा कृष्ण भुसाल, मानबहादुर रावत, पदम केसी, मेघराज भुसाल, माधव वली, विनोद शर्मा लगाएतका रहनु भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष टीकराम खड्काको अध्यक्षता तथा केन्द्रिय सदस्य नरुलाल चौधरीको प्रमुख आथिथ्यतामा बैठक बसेको सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १०देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदै छ ।